Dowladda Kenya oo 6 Bilood Dib u Dhigtay Xiritaanka Xeradda Qaxootiga ee Dhadhaab (VIDEO) - Hablaha Media Network
Dowladda Kenya oo 6 Bilood Dib u Dhigtay Xiritaanka Xeradda Qaxootiga ee Dhadhaab (VIDEO)
HMN:- Dowladda dalka Kenya ayaa muddo lix bilood ku kordhisay xilligii ay shaacisay inay ku xiri doonto xeryaha qaxootiga ee Degmada Dhadhaab ee Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.
Kenya, ayaa 11-kii bishii May ku dhawaaqday inay albaabada u laabi doonto xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, marka la gaaro daba yaaqada bishan November ee sanadkan 2016-ka, laakiin baaqani ayaa mudo 6 bilood ah dib loo dhigay.
Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Kenya, Joseph Nkaissery oo maanta shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Nairobi, ayaa sheegay in xiritaanka xeryaha Dhadhaab dib loo dhigay, illaa iyo 31-ka bisha May ee sanadka soo socda.
Wasiirka, ayaa sheegay in bisha soo socota ee December la kala saari doono dadka qaxootiga ah iyo dadka kale aan qaxootiga ahayn, balse iska diiwaangeliyay xeryaha Dhadhaab, haystana dhalashada dalka Kenya.
Wasiirka, ayaa intaa ku daray in bisha January ay raadin doonaan, haddii ay jiraan dalal kale oo doonaya inay qaabilaan qaar ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed.
Nkaissery ayaa sheegay marka la gaaro bisha May inay dib u celin doonaan tirada qaxootiga ah ee ku soo harta xereda Dhadhaab Waxaa uu intaa raaciyay in markasta uu albaabka u furan yahay qaxootiga sida iskooda u doonaya inay dib ugu noqdaan Soomaaliya.
Hadalka wasiirka Kenya ayaa ku soo beegmaya saacado uun kadib, markii Hay’adda Xuquuqda Aadanaha ee Amnesty International, ay sheegtay in Kenya ay si khasab ahi ku celinayso qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha Dhadhaab.